''छोरी दोश्रो दर्जा बन्न होईन, समान भूमिका निभाउन जन्मिएकी हुन्छे; युवासंघबाट म यस्को बिगुल फुक्छु'' - Himalaya Post
”छोरी दोश्रो दर्जा बन्न होईन, समान भूमिका निभाउन जन्मिएकी हुन्छे; युवासंघबाट म यस्को बिगुल फुक्छु”
Posted by Himalaya Post | ३१ बैशाख २०७५, सोमबार २२:३५ |
नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालकी सचिव अञ्जना अधिकारीसंग हिमालपोष्टले गरेको कुराकानी :
युवा संघको सचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
पार्टीगत राजनीति मेरो कर्म हो । यो मेरो आत्म सम्मान हो । राष्ट्रलाई कसरी मेरो तर्फबाट योगदान गर्ने वा देश विकासको लागि मेरो भूमिका के हुन्छ भन्दा त्यो राजनीतिबाट नै चाँडो सम्भव हुन्छ । त्यो पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगिकार गरेर जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी नेकपा एमालेको बारेमा मैँले सानैदेखि सुनेको र चासो राखेको थिएँ । स्कुलबाट सुरु गरेको राजनीति आज त्यही पार्टीको जनवर्गीय संगठन युवा संघ नेपालको सचिवसम्म आइपुग्दा गौरवान्वितका साथै एकदमै खुसी छु । यसले ममा जिम्मेवारीबोध पनि गराएको छ ।
तपाई आम महिलाको एउटा प्रतिनिधि पात्रका रुपमा त्यहाँ पुग्नु भएको छ । पछिल्लो समय महिलाहरुको पहुँच राजनीतिक क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । यो यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हाम्रो नेपाली समाज पृतिसत्तात्मक समाज हो भनेर हामीलाई थाहै छ । तर अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । हाम्रो देशमा भर्खरै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । नेतृत्वका लागि यी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता धेरै भयो । यसले महिलाहरुको उपस्थिति बढाएको छ । यो राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी हो । यो यात्रामा नेकपा एमालेको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यस्तै मेरो पनि कहीँ न कहीँ थोरै भएपनि भूमिका रहेको मैँले महशुस गरेको छु ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा पुरातनवादी सोच र विकृतिले नै समाजलाई नियन्त्रित गरिरहेको छ । महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा लिइन्छ । यदि कसैले पहिलो बच्चाको सपना देखेको छ भने त्यो पुरुष नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ । यी कुराहरुलाई विस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ । यो स्थानसम्म आइपुग्दा मैँले आफूजस्तै धेरै अञ्जनाहरु जन्माउन सक्नुपर्छ । जसले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको लागि निर्धक्क भएर लड्न सकून् । त्यस्तो किसिमको चेतनाको विकास गराउने क्षमता मैँले देखाउनुपर्छ भन्ने संकल्प मैँले गरेकी छु ।
एउटा सशक्त संगठन युवासंघ नेपालको तपाई अहिले सचिव हुनुहुन्छ । देशमा युवा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । अहिले पनि दैनिक हजारौको संख्यामा कामको खोजीमा खाडी जाने गर्छन् । यी लगायतका युवाका समस्या समाधान गर्नका लागि अब युवा संघको भूमिका के हुन्छ ?
एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । एउटा कुरा तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहान्छु भने हाम्रो आठौँ महाधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न भयो । त्यो महाधिवेशनभन्दा अगाडी संगठनको अध्यक्ष महेश बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा हामीले दई तीन कुरा राज्यसंग जोडदार साथ मागेका थियौँ । किनभन्दा यो मुलुकमा रहेका धेरै दक्ष युवाहरु चाहे त्यो वैचारिक रुपमा होस् वा सीप, ज्ञान क्षमतामा । ती युवाहरुलाई रोक्न उहाँहरुको सीप ज्ञान यही मुलुकमा प्रयोग गरेर आफ्नो देश निर्माण गर्नका लागि हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मागेका थियौँ । जुन आज सफल भएको छ । त्यो युवा संघको एजेण्डा थियो । त्यसको मातहतमा युवा परिषद् खुलेको छ ।
युवा स्वरोजगारको कुरा हामीले पटकपटक उठाएका छौँ । अर्को कुरा व्यावहारिक शिक्षा दिएर युवाहरुलाई आफ्नै देशमा रोक्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको युवाहरुको हितका लागि सरकार समक्ष दबाब हामी दिइरहन्छौँ । जसले गर्दा युवाका पक्षमा काम होस् । यस्तै विविध कुरा हामी उठाउँछौ । युवासंघ हो-हल्ला नाराबाजी वा आन्दोलन मात्रै गर्ने होइन नीति तथा योजना तर्जुमाका क्षेत्रमा पनि काम गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
देशमा अधिकार र राजनीतिक आन्दोलनका कुराहरु सकिएका छन् भन्ने गरिन्छ । युवा संघ नेपालले पनि आन्दोलन प्राप्तिका लागि सडकमा उत्रिएको थियो । अब एजेण्डा फेरिएको छ । विकास र समृद्धिको नारा लगाइरहँदा त्यसमा युवाहरुलाई जोड्न तपाईहरुले कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
प्राकृतिक स्रोत साधान हाम्रो मुलुकमा धेरै छन् । तीनलाई देशको विकास र समृद्धिमा लगाउन सक्नुपर्छ । राजनीति तरल र अस्थिरताबाट अहिले बाहिर आएको छ । अब सबैले विकास र समृद्धिका लागि हातमा हात मिलाएर बढ्नु आवश्यक । युवा संघ नेपाल त्यो कुरामा सहमत छ र भरपुर सहयोग गर्छ । जुन धरातलमा हामी उभिएका छौँ । त्यहीँबाट नै हामीले देशको विकास गर्नुपर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुडीदेखि लिएर कृषि र खनीजपदार्थ लगायतका क्षेत्रलाई देश विकासका लाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा स्थायी सरकारको आवश्यक हुन्छ । त्यो हामीले बल्ल पाएका छौँ । विकास र समृद्धिका सपना बोकेर साँचै देश विकास गर्न चाहाने नेता अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । राज्य र सरकारको नीतिसंग युवासंघ अब हात मिलाएर अगाडी बढ्छ । युवा संघ नेपाल अब आर्थिक समृद्धिका कुरामा, उत्पादनलाई बढाउने कुरामा, देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउने कुरामा युवा परिषद्को माध्यामबाट काम गछौँ ।
तपाईको पार्टीले नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि सरकारी स्तरबाट के कस्ता कदम चाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त काम गर्ने इच्छा शक्ति नै हो । यदि नेतृत्व तहमा काम गर्ने कुनै इच्छा छैन भने तपाईले जती दबाब दिइपनि केही हुँदैन । तर अहिले हामीले साँचै नै देशको विकास गरौँ भनेर आएका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ । उहाँमा देश विकासको सपना र भिजन छ । त्यसले गर्दा अब युवाका पक्षमा काम गर्न हामीलाई पनि सहज भएको छ । युवालाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि सर्वप्रथमतः देशमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । त्यो भनेको प्रयाप्त मात्रामा उद्योगधन्दाको सञ्चालन गर्ने हो । विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन थाल्यो भने त्यसले रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छ । जसले बेरोजगारी समस्यालाई निराकरण गर्छ । तर सरकारले विदेशी लगानीको वातावरण भने सिर्जना गर्नै पर्छ । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चुनावका बेला युवाका पक्षमा देखाइएका घोषणाहरु पूरा गर्नुपर्यो । युवालाई व्यावहारिक सीप र ज्ञान दिएर उनीहरुलाई दक्ष बनाउन सकियो भने उनीहरुले नै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, तपाई अहिले एउटा संगठनमा हुनुहुन्छ । अगाडीको भविष्य के देख्नुहुन्छ ? कसरी अगाडी बढ्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्ने हो । सुशासन र कानुनी राज्यको पत्याभूती आम नागरिकलाई गराउनु नै ठूलो कुरा हो । यी कुराहरु भइसकेपछि मुलुक एउटा माथिल्लो खुड्किलामा उक्लिन्छ । त्यसका लागि हामी आफ्नो संगठनप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । आम युवाहरु जो हामी तिर फर्केर केही आशा अपेक्षा गरिरहेका छन्, तिनीहरुको प्रतिनिधिको रुपमा सरकारसमक्ष सशक्त आवाज उठाउने कामहरु हामी गर्छौँ । अन्य रचनात्मक तथा सिर्जनशील काममा त हामी लागिरहन्छौँ । स्थानीय सरकारसंग गएर त्यहाँका युवा वर्गका समस्या समाधान गर्ने कुरा, पिछडिएको समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने कुरा, जनताको हितका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने लगायतका यस्तै कामहरुमा म लागिरहन्छु । अब देश विकास गर्नैपर्छ ।
Previousकास्कीको लेकसाइडमा एनआइसी एशियाको नयाँ शाखा सञ्चालन
Nextबजेट आउनै लाग्दा साँसद नविनाले भनिन् ”समृद्धि सुरु गर्ने भए शिक्षामा लगानी गरौं”
दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने नेकपाको यस्तो तयारी
१४ श्रावण २०७५, सोमबार १०:१०
राप्रपा एकताको प्रक्रिया शुरु : सशक्त राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्न समझदारी
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार १६:२२
बर्खे भेलसँगै बग्यो सडकमा भएको करोडौं लगानी
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १६:५२